Fikarakarana taratasy etsy ambohidahy :: An-jatony isan’andro ireo manamboatra fahazoan-dalana mamily • AoRaha
Fikarakarana taratasy etsy ambohidahy An-jatony isan’andro ireo manamboatra fahazoan-dalana mamily
Taorian’ny fikatsoan’ny famoahana taratasy fahazoan-dalana mamily biometrika vaovao ho solon’ireo hosoka teo aloha, dia an-jatony isan’andro ireo manamboatra an’io fahazoan-dalana mamily io eny amin’ny Ivon-toeran’ny fanomezan-daharan’ny fiarakodia sady famoahana fahazoan-dalana mamily ary ny taratasin’ny fiara (Cim) eny Ambohidahy. Tafakatra hatrany amin’ny efajato mahery no tonga teny, vantany vao nanomboka ny famoahana an’ireo taratasy ilaina amin’ny fiara ireo, izay ekena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
« Tamin’ny volana mey ny teto amin’ny Cim no nanomboka namoaka indray ny taratasy fahazoan-dalana mamily vaovao. Nahatratra sivy amby roapolo sy sivinjato sy roa arivo sy iray alina no efa voazara tao anatin’izay telo volana izay. Miisa fito amby dimampolo sy roanjato sy telo arivo kosa ny taratasin’ny fiara efa vita », araka ny tatitra avy ao amin’ny Cim. Mbola ireo vao manamboatra fahazoan-dalana mamily no raisin’ny ivon-toerana amin’izao fotoana izao. Amin’ny volana janoary 2020 kosa vao hanomboka ny fanoloana ireo taratasy biometrika natonta teo aloha. Mitentina 39 000 ariary ny saran’ny fanaovana izany saingy ho maimaim-poana kosa ho an’ireo hosoloina.
Nanazava ny avy ao amin’ny Cim manoloana ny resabe amin’ny famerenana ny fampandoavam-bola ho an’ireo efa nahaloa teo aloha. “Misy hosoka ny taratasy fanamarinana fandoavam-bola tamin’ny andron’ny Cetis, ka tsy maintsy mamerina mandoa vola. Ireo antontan-taratasy tamin’ny volana aogositra 2018 no tsy maintsy hohamarinina avokoa. Misy amin’ireo no tsy nianatra mamily fa nandalo tamin’ny mpanera”, araka ny fanampim-panazavana.
Tratra ny tanjona amin’ny famoahana ireo taratasy fahazoan-dalana mamily biometrika ireo ao anatin’ny 72 ora. Maharitra herinandro kosa farafahatarany ny famoahana azy.
Fanatanjahantena bakalorea :: Ankizivavy iray namoy ny ainy taorian’ny hazakazaka
Fanitsiana ao anatin’ny PSE :: Hivoaka amin’ny herinandro indray ny tetiandrom-pampianarana vaovao